Tian’Andriamanitra Hahalala Tsara Azy Ianao
MATOAN-DAHATSORATRA Afaka ny Hahalala Tsara An’Andriamanitra ve Ianao?
MATOAN-DAHATSORATRA Inona no Dikan’ny hoe Mahalala ny Anaran’Andriamanitra?
MATOAN-DAHATSORATRA Nahoana no Misy Tsy Mahalala Tsara An’Andriamanitra?
Ny Tilikambo Fiambenana | 2010-07-01
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Arabo Armenianina Boligara Cebuano Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Groenlandey Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Ndebele Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Slovaky Slovenianina Soedoà Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Tsonga Vietnamianina Xhosa Zoloa
Afaka ny Hahalala Tsara An’Andriamanitra ve Ianao?
Voninahitra ny hoe asaina miantso olona ambony amin’ny anarany. Matetika ny olo-manan-kaja no antsoina amin’ny anaram-boninahitra, toy ny hoe “Andriamatoa Filoha” na “Tompokolahy Hajaina.” Ahoana àry raha misy olona ambony milaza aminao hoe: “Antsoy amin’ny anarako fotsiny aho”? Azo inoana fa heverinao ho voninahitra izany.
HOY ilay tena Andriamanitra ao amin’ny Teniny: “Izaho no Jehovah! Izany no anarako.” (Isaia 42:8) Manana anaram-boninahitra maro izy, toy ny hoe “Mpamorona”, “Mahery Indrindra”, ary “Tompo Fara Tampony.” Manome voninahitra ny mpanompony tsy mivadika anefa izy, ka avelany hiantso azy amin’ny anarany izy ireo.
Nitalaho tamin’Andriamanitra, ohatra, i Mosesy mpaminany hoe: “Tena miala tsiny aminao aho Jehovah ô.” (Eksodosy 4:10) Izao koa no nanombohan’i Solomona Mpanjaka ny vavaka nataony tamin’ny fitokanana ny tempoly tao Jerosalema: “Ry Jehovah.” (1 Mpanjaka 8:22, 23) Hoy koa i Isaia mpaminany rehefa nisolo tena ny Israelita: “Ianao no Rainay, Jehovah ô!” (Isaia 63:16) Asain’ilay Raintsika any an-danitra hiantso azy amin’ny anarany àry isika.
Ilaina ny miantso an’i Jehovah amin’ny anarany, nefa tsy izany fotsiny no tafiditra amin’ny hoe mahalala tsara azy. Izao no ampanantenain’i Jehovah an’ireo tia sy matoky azy: “Harovako izy, satria nanjary nahalala ny anarako.” (Salamo 91:14) Manana heviny lalina kokoa ny hoe mahalala ny anaran’Andriamanitra, matoa tena ilaina mba hiarovany antsika. Inona àry no tokony hataonao mba hahalalanao tsara ny anaran’i Jehovah?